musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Sandals Royal Curaçao inhau dzakanaka dzekushanya kweCuracao
Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Dos Awa, Sandals Resorts 'chete infinity dziva ine yakawedzera kumusoro uye ezasi madheki akakwana kushamisika nekutyisa maonero.
Sandals Resorts International (SRI) inofumura matsva matsva ezvinzvimbo zvayo zvinotarisirwa zvikuru zvechi16 uye kambani yekutanga kupinda muCuraçao, ichangobva kunzi Sandals Royal Curaçao.
Chiziviso chikuru chiri kuuya neChitatu, Nyamavhuvhu chakakosha kune chero munhu anofunga kuenda kuzororo rese reRoyal kuCuracao neJamaican twist.
Izvo zvese zvakatanga Zuva reKisimusi gore rapfuura apo Sandals Resort yakazivisa kuwedzera kwayo kuDutch Caribbean Island yeCuracao - iine Jamaica twist.
Sandals Curaçao inounza hunyanzvi hwekushongedza chitsva kuchitsuwa, icho chakafananidzwa neye inozivikanwa pasi rese chiratidzo cheSandals Resorts mudunhu rese.
Curaçao, chitsuwa cheDutch Caribbean, chinozivikanwa nemabhichi ayo akapinda mumakomba nemakorari ayo akakurisa emakorari ane hupenyu hwegungwa. Guta guru, Willemstad, rine zvivakwa zvekoloni zvine mavara ekare-kare, Mambokadzi Emma Bridge, uye nejecha-rakadzika-muzana remakore rechi17 Mikvé Israel-Emanuel Synagogue. Ichowo gedhi kuenda kumahombekombe ekumadokero seBlue Bay, nzvimbo inozivikanwa yekudonha.
Mangwanani Sandals Resorts International Muvambi uye Sachigaro, Hon. Gordon "Butch" Stewart aive nechiratidzo chekushandura Chitsuwa cheCuracao ndokuenda nemwanakomana wake, Mutevedzeri Wasachigaro Adam Stewart muna Zvita vachiita chiziviso ichi;
"Wanga uri mufaro wedu wakasiyana kushanda pamwe nehurumende yeCuraçao nemhuri yekwaSmeets pachiitiko ichi chitsva chinonakidza cheshandi reSandals," akadaro Gordon "Butch" Stewart. “Tinoshuvira kuratidza kutenda kwedu kukuru kuna Roald Smeets, uyo akabatsira mukuita uku uye anofadza chose kushanda naye. "Tiri kuronga kuita zvinopfuura chikamu chedu kusimudzira kukoshesa kwenyika nyika ino yakanaka."
Yakavakirwa mahekita makumi mana nemana mukati meiyo Santa Barbara yakazvimiririra nzvimbo, yakasarudzika 44-acre yakachengetedzwa inochengetedzwa, Sandals Royal Curaçao ichanyatsobatanidza zvakasikwa zvepasirese zvishamiso - gwenga, gungwa, makomo, uye mahombekombe - neruzivo rwekushanya. Zvakaziviswa kuti Royal Resort ichavhura madhoo ayo musi waApril 3,000, 14
NeChitatu, Nyamavhuvhu 4, 2021Sandals akaita chiziviso chekuti kubhuka zvino kwave kuitika uye kunouya nezvikurudziro zvinodhura $ 1000.
Dzvanya apa kuti uwane chiziviso chakazara.